Sanadka sii dhamaanaya ee 2017 waxaa jira ciyaartooy fara badan oo guursaday isla markaana nolol cusub bilaabay waxaana warbixintan aan ku soo gudbin doonaa 5 ciyaartooy oo guursatay sanadkan dabayaaqada ku dhaw ee 2017.
Mucjisada gaaban ee Barcelona iyo Argentina Lionel Messi ayaa30kii June ee sanadkan guursaday Antonella Racuzza oo tiro caruur ah u heysa waxaana guurkooda uu ahaa mid taariikhi ah maadaama caruurnimo ay isku calmadeen.
Kadib sanado fara badan oo haasaawe iyo xiriir jaceyl ay soo wadeen daafaca Manchester United iyo xulka England Phil Jones iyo Kaya Hall ayaa is guursaday 16kii June 2017 waxaana xaflada arooskooda ka soo qeyb galay wajiyo caan ah oo ciyaara kubada cagta.
Weeraryahanka La Roja iyo Chelsea Alvaro Morata ayaa bilo uun ka hor ku biiristiisii Chelsea la aqlgalay gabadha ka soo jeeda Talyaaniga ee Alice Campello waxaana guurkooda uu ka dhacay magaalada Venice ee dalka Talyaaniga.
Gool dhaliyaha heerka caalami ee France ayaa kamid ah ciyaartooyda guursatay sanadka sii dhamaanaya ee 2017 waxaana uu bishii May ee sanadkan guursaday gabadha lagu magacaabo Eriks Choprena oo hada hal cunug u heysa.
Daafaca England iyo Manchester United ayaa 21kii July ee sanadkan sii dhamaanay guursaday gabadha Moodalka ah ee Sam Cooke waxaana uu guurkoodu ka dhacay harada Lake Como oo ku talla dalka Talyaaniga.
Ciyaartoyda Chelsea oo Guul muhiim ah ka gaaray kooxda Newcastle ...
Cayaaraha 09.01.2018. 15:56